”Aan Qadar weerarno, Israel-na la heshiinno!” – Imaaraadka oo siri kasoo fakatay (Arag jawaabo kulul oo la is dhaafsaday!) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Aan Qadar weerarno, Israel-na la heshiinno!” – Imaaraadka oo siri kasoo fakatay...
”Aan Qadar weerarno, Israel-na la heshiinno!” – Imaaraadka oo siri kasoo fakatay (Arag jawaabo kulul oo la is dhaafsaday!)
(Dubai) 07 Juun 2020 – Madaxa Amaanka iyo Taliyaha Booliiska Dubai, Jeneraal Dhahi Khalfan, ayaa muran kiciyey kaddib markii uu si cad ugu baaqay in duullaan lagu qaado dalka Qadar isla markaana lala heshiiyo Israel.
Khalfaan ayaa tweet-kiisa marka laga soo tago in la qabsado Qadar ee loo dhiibo wax uu ku sheegay ”qof u qalma”, wuxuu aad ugu fogaadey boorrinta in xiriir lala yeesho Israel oo haatan ku tala jirta inay markale qaadato dhulka Falastiin, gaar ahaan Daanta Galbeed.
”In aan Israel la aqoonsan wax micne ah kuma fadhido, waayo waa dal ku dhisan aqoon, baraare iyo xiriir ay la leedahay dunida hormartay oo idil. Yaa tahay marka aadana qoonsanayn dal leh qiyamka Israel…”. ayuu is waydiiyey, kahor intii aanu tweet kale ku codsanin in la adeegsado tibixda ‘Israeli saaxiib ah’ halkii la adeegsan lahaa ‘Israeli cadow ah”.
Intaa kaddib waxaa weerar kusoo qaaday dad kala duwan oo aad uga jeex jeexay, waxaana tweets-kii jawaabta ahaa ka mid ahaa kuwan hoose oo aannu kiisa ka bilaabayno:
Tarjumaad: Duullaan Carbeed oo Qadar lagu qaado…iyo soo qabashada wiilka yar…Arrimo badan bay xallinaysaa…Qadar u dhiiba qof u qalma lana heshiiya Israel…. Wax kasta waa dhamaanayaan.
Tarjumaad: Haddii ay geesinnimo wax uun idinkaga dhigan tahay, kamaad hadasheen in Carabta loo dumo dal aad ku tilmaamayso mid yar. Dhimanaanta kugu jirta laguma buuxin karo adeegsiga Janjaweed…
Tarjumaad: Marka aad ku baaqdo duullaan ka dhan ah Qadarta aadka u yar, taasi waxay ka dhigan tahay inaad qiranayso in afarta dal ”ee wax go’doomiyey” ay ku fashilmeen inay ku duulaan Qadar oo ay xulufo wayn u baahan yihiin. Guud ahaan, Ibn Zayed waa ogyahay in Qadar aysan hubka iyo gantaalaha u iibsanin inay matxafyada dhigto!
Dadka qaar ayaa arrinta la aadey Twitter laftiisa oo ay doonayeen inuu tillaabo ka qaado ninkan oo ay sheegeen inuu halis gelinayo amaanka dal kale oo uu hanjabayo.
Tarjumaad: Sidee Twitter u ogolaaday tweet-yadan oo kale, oo ah hanjabaad cad oo dal kale ka dhan ah? Waa arki doonnaa haddii uu tillaabo qaadayo Twitter ama uu iska indha tirayo sidii hore?
Tarjumaad: Halkii aad ka adeegsan lahayn Israeli cadow ah, adeegso Israeli saaxiib ah…. Maxaa dhib ah? Ayuu yiri Khalfaan.
Khalfaan ayaa horay dadka uga yaabiyey markii uu ku baaqay in ay Dooxa faraha ka qaaddo martigelinta Koobka Adduunka.
Imaaraadka oo ay wehliyaan Saudi Arabia, Bahrain iyo Egypt ayaa xiriirrada diblomaasi oo idil 2017-kii u jaray Qadar, kaddib markii ay mar qura ku kulmiyeen eedayn sii qorshaysnayd oo ah inay ”argagixisada taageerto”, taasoo ay Qadar beenisey.
Waxay deeto soo gudbiyeen liis ay ku taxan yihiin dalabyo ay Qadar uga doonayeen inay muddo 10 maalmood ah ku fuliso, waxaana ka mid ahayd inay xiriirka u jarto Iiraan isla markaana xirto hilinka Al-Jazeera, kaasoo aanay cidina dheg jalaq u siinin.
Wasiir Dibadeedkii hore ee Maraykanka ee Rex Tillerson ayaa horay u sheegay in Imaaraadka iyo Sucuudigu ay qorsheeyeen inay toos u wareeraraan Qadar, balse uu isagu diidey, isla markaana uu arrinta ka dhaadhiciyey MW Donald Trump oo ra’yi kale qabey bilowgii.
Previous articleIMAARAADKA CARABTA: Sharwadayaal dunida Muslimka dab ku shidaya! (Arag inta eel ee ay dhigeen)
Next articleNATIIJO LID AH: DF oo isku KASHIFTAY dibedbixii ay shalay ku qabatay magaalada Muqdisho! (Daawo)
(Hadalsame) 25 Sebt 2020 - Cirbixiyeenka Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS), ayaa ku khasbanaaday inay ka cararaan firirka Dayax-gacmeed kusoo wajahnaa halkii...